Rasaasa News – Dagaal Ciidamada Soomaaliya iyo Liyuu Booliska.
on June 2, 2014 2:12 pm
Wajaale, May 2, 2014 – Maleeshiyada Liyuu Booliska iyo ciidamada dawlada wadaaga ee dalka Somaliya oo isku dhinac ah iyo Alshabaab oo dhinac ah ayuu dagaal ku dhexmaray tuulada Aato, ee gabalka Bakool.
Dagaalka u dhaxeeya labadan dhinac ayaa bilowday shalay gabal dhicii, isaga oo socday tan iyo xalay xili dambe. Dagaalka ayaa la sheegay in ay ku dhinteen in ka badan 60 ruux oo ka tirsan ciidamadii dagaalamayey iyo 15 ruux oo shacab ah sida ay sheegeen warar madax banaan oo ka soo baxay goobaha dagaalka.
Tirada dhimashada ciidanka Liyuu Booliska ee dagaalka xalay ka dhacay tuulada Aato, ayaa la sheegay in ay tahay 30. Toban ka tirsn ciidanka Maleeshiyada Liyuu Booliska ayaa hore loogu dilay dagaal ka dhacay isla tuulada Aato. Kuwaas oo dhimashadooda aan laga sheegin degaanka Somalida. Dhinaca Al shabaab iyo Shacabka dhintay ayaa tiradooda lagu sheegay 45 ruux.
Tirada guud ee dhimatay ayaa la sheegay in ay tahay 75 ruux, oo Somali ah magaca ay doonaan ha wataane.
4,000 oo ka tirsan ciidanka federalka Atoobiya, ayaa ku jira ciidamada Amisom ee ka dagaalama dalka Somaliya. Kuwaas oo mushaar ahaan u qaata [US$1,500] 1,500 oo Doolarka Maraykanka bil walba.
Waxaa kale oo gabalada dalka Somaliya ee Bay, Bakool, Gedo, Hiiraan iyo GalGaduud jooga 5,000 ciidamada fedralka Atoobiya. Kuwaas oo qalabka ay isticmaalaan oo casri ah iyo daawadaba ka hela AMISOM.
Hadaba, waxaan ilaa iyo hada la garanayn sababta ay gudaha Somaliya u soo galeen maleeshiyada aan qalabaysnayn ee Liyuu Booliska. Marka ay ciidamadii loogu talo galaya dagaalka AL shabaab ay daawanayaan dagaalada u dhaxeeya Somalida noocyada badan.